Dowladda Itoobiya Oo Xaqiijisay in isagu uu isdilay injineerkii Dhismaha Biya Xireenka Al Nahda.
Saturday September 08, 2018 - 10:36:07 in Wararka by Super Admin
Kadib Baaritaanno muddo bil ah qaatay ayay ugu dambeyn dowlada Itoobiya ku dhawaaqday natiijada kasoo baxday baaritaannadaas shakiga badan dhaliyay.
Taliyaha guud ee Booliska dalka Itoobiya Ninka lagu magacaabo Zeenu jamaal ayaa xaqiijiyay in madaxii dhismaha Biya xireenka Al-nahda uu isagu isdilay oo aysan jirin cid dishay.
" Simgnio Beckley injineerkii dhismaha Biyaha xireenka Al-Nahda isaga ayaa ismiidaamiyay sida ay caddeynayaan dhammaan baaritaannadii ay sameeyeen ciidamada Booliska iyo kuwa sirdoonka" ayuu yiri taliyaha Booliska Itoobiya.
Baaritaanno ay ka qeyb qaateen khubaro Mareykan ah ayaa muujinaya in Simgnio Beckley uu isagu isdilay kadib markii farihiisa oo kaliya lagasoo calaamadeeyay bastooladdii uu isku dilay.
Sidoo kale gaarigii Meydkiisa lagasoo helay wax rasaas ah ugama dhicin dariishadaha gaariguna wuxuu ahaa nuuca aysan xabaddu karin, saraakiisha sirdoonka Itoobiya waxay saadaaliyeen in sababta uu isku dilay ay aheyd dib udhigista dhammeystirka Biya xireenka oo keeni karta lacag dheeri ah ku kororta qoondadii lagu dhameystiri lahaa.
Malaayiin qof Itoobiyaan ah oo ka caraysan dilka Simgnio Beckley ayaa horay dibad baxyo uga dhigay magaalada Addis Ababa waxayna dalbanayeen in lasoo qabto kuwii dilay Injineerkii Biyaha xireenka ugu weyn qaaradda Afrika.
R/wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa horay u sheegay in uu ka murugooday dilka Simgnio Beckley isagoona ballan qaaday in la ogaan doono xaqiida ka dambeysa dilkiisa.
Dhismaha Biyaha xireenka Al Nahda ayaa khilaaf ka dhax oogay wadamada Masar,Suudaan iyo Itoobiya oo isku mariwaayay qeybsiga biyaha wabiga Niil.
Dowladda Ingiriiska Oo Saldhig Melleteri ka furatay Magaalada Baydhabo [Warbixin].
Dowladda Suudaan oo laga Joojiyay Xubinnimadii Ururka Midowga Afrika.
Iska Hor'imaad Khasaara dhaliyay oo degmada Xamarweyne ku dhaxmaray ciidamo kawada tirsan dowladda.
Dhageyso: Suldaan Garyare oo si qota dheer uga hadlay daan daansiga Itoobiya ee Soomaaliya.